Ronaldo ရဲ့ နှလုံးသားနယ်ပယ် အသစ်လေလား??? | သစ်ထူးလွင် (အားကစား)
Home / featured / Ronaldo ရဲ့ နှလုံးသားနယ်ပယ် အသစ်လေလား???
Ronaldo ရဲ့ နှလုံးသားနယ်ပယ် အသစ်လေလား???
မကြာသေးခင်ကမှ Jonathan Ross Show မှာ မိန်းမတွေအကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ Ronaldo ဟာ သူ့ရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။ သူရဲ့ နှလုံးသားနယ်ပယ်အသစ်ကတော့ အဝေးကြီးမှာ ရှိမနေခဲ့ဘဲ အနီးဆုံးလူတစ်ယောက်ကို ကြံစည်နေတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
Ronaldo ရဲ့ ချစ်သူအသစ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံနေရသူကတော့ Ronaldo ရဲ့ စူပါအေးဂျင့်ဖြစ်သူ Jorge Mendes ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Marisa Mendes ဖြစ်ပါတယ်။ Marisa ဟာ Ronaldo ရဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲဦးထွက်ကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရီးရဲလ်စတားပါဝင်တဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေကိုလည်း တက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သူမဟာ အခုတလော Ronaldo နဲ့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ပူးတွဲတွေ့နေရတာကြောင့် မီဒီယာတွေက ကြိတ်ပုန်းတွဲခုတ်နေသလားလို့ ထင်နေကြတာပါ။ Ronaldo ဟာ အေးဂျင့်ဖြစ်သူ Mendes နဲ့ ရင်းနှီးလွန်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီး Mendes ရဲ့ မွေးနေ့မှာလည်း သူပိုင်တဲ့ ဂရိကကျွန်းတစ်ကျွန်းကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ဆုံး ထွက်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာလည်း Mendes ကို အစ်ကိုရင်းတစ်ယောက်လို ခင်တွယ်နေတာကို ပုံဖော်ထားပါသေးတယ်။
Ronaldo က အခုလို အေးဂျင့်ဖြစ်သူကို နေရာပေးနေတာဟာ လိုချင်မှုတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်ကတော့ Marisa ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Ronaldo ဟာ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ စူပါမော်ဒယ် Irina Shayk နဲ့ လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ အချစ်သစ်ကို ရှာဖွေနေဆဲ ရှိနေတာပါ။ " Relationship တစ်ခုကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ၅၀ % သော မိန်းမတွေက ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ လာချစ်ကြတာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရုပ်ရည် ၊ ခန္ဒာကိုယ်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မိန်းမမျိုးကို မလိုချင်ပါဘူး။ ဒီလို ပြဿနာတွေကတော့ ကျော်ကြားတဲ့သူတိုင်းက ကြုံတွေ့နေရတယ် " လို့ Ronaldo က ပြောပါတယ်။